Ukuze uthole incazelo enembile amaphupho, kufanele uhlole imithombo esoteric ngaphezulu ukuthi zaziwa kithi njengoba eziqeda amandla. Kusibonelo kubhekwe ukuba zinyatheliswe uyaphupha uphawu sobala kahle ukuthi lingahunyushwa ngalezi zindlela ehlukile. Ufuna ukwazi ukuthi ngiphupha nengonyama? Akunzima ukuqagela ukuthi iphupho kufaniswa amandla bantu abathile wasebukhosini. Zonke kweqiniso, kodwa kungakhathaliseki ukuthi ukhuluma ngani?
Ukusekelwa umuntu enethonya, noma izinkinga boss
Saqala ucwaningo lwethu ne ABC ukuchazwa kwamaphupho. Kungenzeka ukuthi lowo mphuphi walelo (azizwa) irula, inkosi ukuphila. Kaninginingi sikhumbula ukubaluleka imininingwane ukhetha e iphupho lakho. Uma inkosi yezilwane wabheka eSmirna, ezifuywayo, kungenzeka ukuthi uyoba esinamandla nokuvikelwa kobunikazi. Isimo reverse yilokhu uyaphupha? Lion ehlasela, nokujaha ephusheni? Reality kungaba ukuxabana abaphathi bakhe. Kuzo zonke izimo, uphawu uchazwa ngamandla. Kokunye samuntu, incazelo yalo umphuphi nethonya kakhulu. Ingxenye yesibili ibonisa yokukhosela sokulala abatholakali, futhi eyesithathu - kwengxabano abenayo abaphathi bakhe. By the way, iphila kahle, uma ngiphupha wena yezinyoni ne ingonyama. Linda kuzivakashi kunamathuba amaningi okuthi bangaba yini abangane bakho abathembekile.
Kusukela abalandeli ngeke Abuya
Futhi yini waphupha owesifazane ibhubesi? Kukhona umthombo ukuhumusha izinhlamvu, ngokuthi Dream ncwadi labesiFazane. Nasi ukucaciseleka: "Wena ngiphupha amawundlu? Kusukela abalandeli ngeke uhlanganyele! "
Dream Miller osakaza khona amandla angaphakathi
Lo mthombo sisebenzisa cishe njalo isifundo esinjalo. Yini ngiphuphe ingonyama ekukhanyeni incazelo yaleli Dream Miller? Kubonakala sengathi lowo mphuphi walelo engaphansi kwethonya elinamandla amandla yangaphakathi. Udinga nje sifunde ukuphila ngokuvumelana nalo, ukulawula futhi ngokungasilaleli isukela lokhu ungacabanganga. Kuyaphawuleka ukuthi walawula, waweyisa ingonyama iphupho, futhi uzokwazi ukuba banqobe noma iziphi izithiyo empeleni ngempumelelo ukuqedela ibhizinisi. Uma ngiphupha nomqeqeshi, ibuse amabhubesi ukulawula ukuziphatha kwabo - kuhle futhi. Uyophumelela, uma kuzo zonke izindlela zakhe, wena ukudingela nokuchuma.
Ake sixoxe uthando hhayi kuphela
Okuphawulekayo ukuze uthole enye impendulo yombuzo othi: "? Yini ngiphuphe ingonyama" Nge amakhono ezehlukile empilweni yangempela, ungaba azinake zabantu eziningi ezithakazelisayo. Phakathi kwabo kuyoba khona owesifazane. Uma iphupho uyintombazane iphupho, layo ebukekayo kuthandana. Predator futhi ngangivuka ngikhalelwa? Ngu wawulotshwe ngenhla uthi, silayishe khona okuphumelela sphere eziningi zokuphila.
Ukugibela inkosi kwezilwane, ekunqobeni noma yiziphi izithiyo
Yini ngiphuphe angamazinyo engonyama, uma babehlezi, ngulowo lalowo nomzingeli phezulu? Lokhu kuzakuba yisibonakaliso kundlu ezinhle othembisa impumelelo ophuphayo lokunqoba zonke izinhlobo zezithiyo endleleni eya umgomo. Ngokuqinisekile kufanele siphikelele, ukuze batshengise isibindi.
Dream Ukuhunyushwa Hasse esifingqa
Yini ngiphuphe angamazinyo engonyama, wena stroked futhi caressed iphupho? Ukuphila kwakho kuyoba umngane weqiniso. Uma izilwane ezidla ezinye babebaningi, ngokoqobo uzobe ukuhlangana nomuntu abanethonya futhi wakuthola. Ngisho ukubulala ingonyama iphupho, ekuphileni kwangempela, uzuza amandla, abe abalulekile futhi ubuntu namandla. Hluzeka, lisebenza futhi enamandla!
Kungani dream of a inkukhu? Izivakashi nezinzuzo!
Dream Ukuhunyushwa: yini uyaphupha insipho
Phezulu encwadini iphupho: izinhlanzi eqandisiwe lokho kuyiphupho nje?
Indlela ukuqeda herpes phakade